Kaamerawwan nageenyaa Finfinneetti dhaabatan hojii eegalan – Fana Broadcasting Corporate
Kaamerawwan nageenyaa Finfinneetti dhaabatan hojii eegalan
Finfinnee, Gurraandhala 4, 2011 (FBC)-Kaameraawwan nageenyaa magaalaa Finfinnee daandii Booleerraa gara addabaaba’ii Masqalaa geessu irratti dhaabatan hojii eegaluu isaanii Koomishiniin Poolisii Federaalaa beeksise.
Kaameraawwan kunneen kan dhaabatan addabaaba’ii Booleerraa hanga karaa mirgaa fi bitaa addabaaba’ii Masqalaatti.
Koomiishinichatti itti gaafatamaan diiviizhinii aysiitii infiraastiraakcharaa itti aanaa Inispeektaraa Aandinnat Sisaayi gara fuulduraattis magaalichatti daandiiwwan adda addaa irratti kaamerawwan dhaabuuf karoorri jiraachuu himaniiru.
Kaameeraawwan amma dhaabaman guyyoota 4 dura hojii eegalaniiru.
Hojiin hordoffii fi waraabbii kaamerawwaanii halkanii guyyaa osoo addaan hin citin hojjachaa jiraachuu ibsaniiru.
Koomishnichatti bakka bu’aan daayreektoreetii babali’ina teeknooloojii Huunanyaaw Ayyanaw akka jedhanitti, kaameraawwan magaalichatti kanaan dura iddoo muraasatti argaman kan ka’an hojii daandiin walqabatee ta’uu beeksisaniiru.
Ta’us tajaajila kennuu eegaluun isaanii Finfinneen teessoo baay’ee waajjiraalee Frikaa fi Idil-addunyaa ta’uun walqabatee eegumsa cimaa gochuuf faayidaa olaanaa qabaachuu dubbataniiru.
Kaameraawwan nageenyaa waajjiraalee baay’ee baajata guddaa fi hojii qindoomina gaafatu waan ta’eef kutaalee biyyaa hundatti al tokkoon waliin gahuun rakkisaa ta’us gara fuulduraa garuu keessattuu magaalota iniidaastiriin argamutti babal’suun barbaachisaadha jedhaniiru.
Instaagiraamiin “like” fayyadamtootni hordooftootasaanirraa argatan dhoksuu eegale
Awustraaliyaan madda anniisa humna Aduurra Idil Addunyaatti beekama ta’e ijaaruufi
Dhaabbilee teeknooloojii irratti taarifa dabalataa Faransaay taasisteen Ameerikaan…
Iityoo – Teelekoom tajaajila tolaa laachuu eegale